Raw Tadalafil Powder (171596-29-5) Vagadziri & Vanopa - Fekitori
Raw Tadalafil powder pasi pezita rekuti Cialis inoshandiswa kurapa kusagadzikana (kushaya simba) uye zviratidzo zvebenign prostatic ………
Skukodzera Inogadziriswa muDMSO (78 mg / ml pa25 ° C), methanol, mvura (<1 mg / ml pa25 ° C), dichloromethane, uye ethanol (<1 mg / ml pa25 ° C)
Storage Temperature Chengetedza pakushambidzika kwemukati pakati pe 59 ° F uye 86 ° F (15 ° C uye 30 ° C). Usachengete mushonga uyu munzvimbo dzine hunyoro kana nyorova.
Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6, 3,4] pyrido [1,4-b] indole-5-dione (Cialis), rudzi rwe PDE5 inhibitor uye chinodzorerwa nemuromo. Iyo b-carboline yakatorwa uye yakarongeka zvakasiyana kubva kune vardenafil (Levitraw) uye sildenafil (Viagraw), ese ari ma PDE171596 inhibitors akavakirwa pane fused pyrimidine yakakosha mamiriro. Tadalafil powder (CAS 29-5-2003) inowedzera kuyerera kweropa kupinda mu corpus cavernosum nekuzorodza tsinga dzetsinga dzeropa, uye izvi zvinogonesa murume kuwana erection. Tadalafil powder yakagamuchirwa neUnited States (US) Kudya neDrug Administration (FDA) muXNUMX yekurapa kusagadzikana (ED), uye kutengeswa pasirese pasi pezita rekuti Cialis. Iyo inoshandiswawo kurapa pulmonary arterial hypertension uye benign prostatic hyperplasia, mamiriro umo iyo gland yeprostate inowedzerwa, zvichikonzera matambudziko nekuita weti.
Tadalafil's inosiyanisa pharmacologic ficha ndeyakareba hafu yeupenyu (maawa 17.5) uchienzaniswa neViagra neLevitra (maawa 4-5). Iyi yakareba hafu yehupenyu inoguma mukureba kwenguva yekuita uye iri, muchidimbu, inokonzeresa zita rezita reCialis re "piritsi revhiki." Iyi yakareba hafu yeupenyu zvakare ndiyo hwaro hwekuferefetwa kwazvino kwekushandiswa kwetadalafil mupermonary arterial hypertension seyakangoita-yezuva nezuva kurapa.
Mhinduro iyi inopindirana nekusunungurwa kweNitric oxide (NO) kubva kumagumo emagetsi uye masero endothelial, ayo anomutsa kusangana kweCGMP mumaseru emhasuru akatsvedza uyezve inodzora kudzikisira uye kudzvinyirira kwetsinga dzeropa dzinotakura ropa kuenda nekubva kunhengo yemurume. Cyclic GMP inokonzeresa kutsetseka kwemhasuru kuzorora uye kuwedzerwa kweropa kuyerera muiyo corpus cavernosum, uye inoshatiswa neiyo cGMP yakatarwa phosphodiesterase mhando 5 (PDE5) muiyo corpus cavernosum iri padhuze nepenis. Tadalafil inhibits PDE5 uye nekudaro inowedzera nekuwedzera huwandu hwecGMP inowanikwa. Tadalafil inomisa PDE5 kubva pakuparadza cGMP uyezve inowedzera iyo inowanikwa cGMP kuti iite basa uye inokonzeresa kuti erection igare kwenguva yakareba.
Zvisinei, sezvo hafu yeupenyu hweTadalafil iri pfupi, mhedzisiro yayo inopera mukati memazuva maviri ichiita kuti PDE2 idzoke uye hutano hwako hwepabonde - huwedzere. Ungangoda kutora nguva yakareba kuti uwane zvaunoda, senge yakaderera-simba Cialis 5-4 mazuva kwemazuva 5-4.
Cialis inouya yeyero, yakavharwa-firimu-uye mahwendefa akafanana nemaamondi mu5, 10 uye 20 milligram (mg) doses. Iyo yakakurudzirwa kutanga dosi yeCialis poda yekushandisa sezvainodiwa mune vazhinji varwere ndeye 10 mg, inotorwa isati yatarisirwa kuita zvepabonde.
Adala Tadalafil powder inogona kubatsira kusunungura mhasuru muprostate yako uye bladder. Izvi zvinogona kubatsira kuvandudza ako BPH zviratidzo.
Kuvandudza zviratidzo zveED, tadalafil powder inobatsira kuwedzera kuyerera kweropa kuenda kunhengo. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuwana uye chengeta erection. Zve tadalafil powder kuti ikubatsire kuva ne erection, iwe unofanirwa kumutswa pabonde.
♦ YePAH, tadalafil poda inoshanda kuvandudza kugona kwako kurovedza muviri nekuzorodza tsinga dzeropa mumapapu ako. Izvi zvinowedzera kuyerera kweropa.
▲Kuumbwa kwehurume hwepeni, senge chirwere chePyronie
Tadalafil powder, sildenafil powder, uye vardenafil powder zvese zvinoita nekudzivirira iyo PDE5 enzyme, asi iyi mishonga inodzivirirawo PDE enzymes 6, 1, uye 11 mumatanho akasiyana. Semuenzaniso, Sildenafil uye vardenafil inhibit PDE6, enzyme inowanikwa muziso, kupfuura tadalafil. Vamwe vashandisi veSildenafil vanoona bhuruu tinge uye vane hunhu hwakawedzera kune mwenje nekuda kwe PDE6 inhibition. Kunze kwezvo, Sildenafil uye vardenafil zvakare inhibit PDE1 kupfuura tadalafil. PDE1 inowanikwa muuropi, moyo, uye vascular midhi mushe. Izvo zvinofungidzirwa kuti kuvharirwa kwe PDE1 ne sildenafil uye vardenafil kunotungamira kune vasodilation, kufashaira, uye tachycardia.